ချိန်းတွေ့ဆိုက်ဂျာမန်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအဘို့အရှာဖွေနေချိန်းတွေ့၊ချစ်ကြည်ရင်း၊ဆွေးနွေးမှုများနှင့်အိမ်ထောင်ပြု။ လူပေါင်းတွေ့ဆုံရန်မှဂျာမဏီ၊သြစတြီးယား၊ဆွစ်ဇာလန်။ အစည်းအဝေးလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်နှင့်အို။
‘ငါပြောချင်က်းဇူးတင္ပါဓာတ်ပုံများအအို။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သင်သည်နှစ်ခုစလုံးဒန်နှင့်လီလီ။ မရှိဘဲသင်၏အလုပ်နှင့်ပေါ်ပေါက်လာဤစာမျက်နှာ၏၊ကြောင့်ကြပြီစွာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်မတို့သိချင်ပါတယ်။»ကမိုင်မှကျွန်တော်တို့ကိုမတားဆီး။ ကျနော်တို့အရေးအသားအဘို့အပြီး၊ကျွန်တော်ခလုတ်ကနေတဆင့်။။။။။ ကျနော်တို့ချက်ချင်းမေတ္တာ!!! ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးဗီဒီယိုစကားပြောကြာေနာ။ ထိုအရပ်မှ၊ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ခြင်းငှါအထပ်ထပ်ဆွေးနွေးပါ။ သွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်။»မင်္ဂလာပါလူ၏ဓာတ်ပုံများနှင့်အို! ကျွန်တော်တို့တွေအရေးအသားအဘို့အပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ်နေ့၏၊ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာပြောင်းလဲခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမနေ့ကျွန်တော်မရေးမ။ ကျွန်ုပ်တို့မင်္ဂလာဆောင်စီစဉ်ထားပြီးသား။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ‘သင်တို့အဘို့အရှာဖွေနေပါတယ်၊ပျော်စရာ၊လိင်သို့မဟုတ်ထောင်၊ကျနော်တို့စိတ်ချယုံကြည်ကြောင်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်ညာဘက်မိတ်ဖက်သင်တို့အဘို့အ၊ဒါမှမဟုတ်ကြိုးစားနေပျော်စရာရှိသည်! အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ရန်၊ဒါကြောင့်ဘယ်အရာကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်? တက်လက်မှတ်ထိုးခြင်းနှင့်သင်တို့အဘို့အရှာနေ
© 2019 ဗီဒီယိုက ချက်တင် ပြင်သစ်